မီးတို့ အိမ်မှာက ဖော်ဝပ်မေးလ်က စာ မတင်ရဖူးလို့ အယ်ချုပ်က ပြောမထားတော့ မီးက ဒါမျိုးတွေ လုပ်လိုက်တယ်။
ဖော်ဝပ်မေးလ်ထဲက။ ကြိုက်တာနဲ့။ ရေးသူက ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါး။
ကဲ-- ကဲ။ ဘွဲ့ရဖို့ ကြိုးစားရင် စောင့်မယ်ရှင့်။
စည်း အပြင်ကလူ ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ။
ပြန်သုံးသပ်... မပြိုင်နဲ့ ဦး။
မင်းတုံးသေးလို့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ
နေ့ နဲ့ ညလိုပါပဲ
နေ့ ပြီးရင် ညလာမယ်
ညပြီးရင် နေ့ လာမယ်
မင်း ဘာကိုမစောင့်နိုင်တာလဲ။ ။
( ၀စီပိတ်ဆရာတော် )
Posted by အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ at 7:02 PM7comments
ဘာရယ်ညာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ပေါ့။ စိတ်တွေချည်း ပူနေရတာ။
စာသားနဲ့ အသံနဲ့တော့ ကိုက်ဖူးရယ်။
Posted by အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ at 12:30 AM3comments
တခါတော့ ဂျပန်ပြည်က မြို့တမြို့ရဲ့ အိမ်ခန်းတစ်ခုမှ နေပြီး မြန်မာပြည်က အစ်မဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်..
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ ကျုကျု ပါ ။ ဒီဌာနက ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်တင် နဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါ။
(..)??? အစ်မ ဘာများဖြစ်သွားပါသလဲ
ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော့်နာမည် ကိုအောင်ပါ။ အိရဲ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ..
အိုကေ အိုကေ ရှင်းလေ ရှူပ်လေ။ ဆိုရေ ၀ ၀ါကတ်တယ်ရု ရော ( sore wa wakatteru yo) (".").
ဟာ.. မုဇုဂါးရှိး.. နား...။ ဂျ.. ဒေါ်တင်တင် ကိုသာ ခေါ်ပေးပါတော့ ရှင် ..
ဟုတ် ဟုတ် ကဲ့..
ထိုသူက ဖုန်းကို ဘေးမှာ ခဏချထားလိုက်ပြီး တဖက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်.။
“ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်တင်. ဒီမှာ ခင်ဗျားရဲ့ လူနာထင်တယ်”
ဟာ တောက် ဒီလူတော့.... (((>.<)))
ဂျပန်စကား မတောက်တခေါက်ကလည်း တခါတခါ လူကို လူနာဖြစ်စေ၏..
ဒန့်.. တန့် .. တန့်...
မုဇုဂါးရှီး.........နဲ Muzukashii..ne (^^)/
လေ့လာသူတစ်ဦးမှ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုအား တင်ပြသည် ..
Posted by အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ at 2:59 PM2comments
၁) Physically strong (အမောဒဏ်၊လဲဒဏ်ခံနိုင်တာပေါ့..း)
၂) Trainer (ဒါမှမဟုတ်..သင်ပေးနိုင်မယ့်တယ်ချင်း)
၃) Arm Wallet (liftလက်မှတ်၊ပိုက်ဆံထည့်ပြီးလက်မှာပတ်ထားလိုက်ရုံပဲ။
၄) Helmet (လဲရင်မနာတာပေါ့)
Posted by အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ at 1:55 PM6comments
Posted by အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ at 9:16 PM3comments
အမုန်းမရှိတဲ့ ကမ္ဘာလေး အစဉ်ထာဝရ ငြိမ်းချမ်း သာယာပါစေ
စဇအဲ စံ (5)
K Lay (1)
အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ. Picture Window theme. Powered by Blogger.